हाकिमसँग ओछ्यान तताउन जान महिला प्रहरीले छोरीलाई भ्यानमा को’चिन् फर्किदा मृत्यु भइसक्छ ! – Khabaarpati
November 6, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on हाकिमसँग ओछ्यान तताउन जान महिला प्रहरीले छोरीलाई भ्यानमा को’चिन् फर्किदा मृत्यु भइसक्छ !
काठमाडौं । भौ’तिक सु’ख प्राप्त गर्नका लागि महिलाहरु के सम्म गर्न सक्छन् त्यसको एक दर्दनाक घटना बाहिर आएको छ । अमेरिकाको मिसिसिपीमा एउटा आश्चर्यजनक घटना बाहिर आएको छ । त्यहाँको लांगबीचमा एउटी आमाले आफ्नी छोरीलाई प्रहरीको भ्यानमा छोडेर जे गरिन् त्यसले सबैको होस उडाएको छ ।
ति महिला आफ्नो हाकिमसित भौ’तिक सु’ख पाउनका लागि छोरीलाई भ्यानमा कोचेर आफु हाकिमसँगै घरभित्र जान्छिन् । घरमा सम्पर्क राख्दा केही समय बिताएकी महिला ढिला आउँदा छोरीलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि मृत्यु भैसकेको हुन्छ ।
जानकारी अनुसार महिला प्रहरी अधिकारी र उनको हाकिमबीच सम्बन्ध कायम गरेपछि घरभित्रै निदाएर ४ घण्टापछि फर्केका थिए । जब बार्कर फर्किइन्, तब उनले आफ्नो छोरीको कुनै चाल पत्तो पाइनन् । द वाशिङ्गटन पोष्टको एक रिपोर्टमा भनिएको थियो कि प्रशासनले छोरीको मृत्यु हुनु अघि उनको शरीरको तापक्रम १०७ डिग्री पुगेको बताएको थियो ।
यद्यपि यो अस्पष्ट छैन कि बार्करले जानाजानी आफ्नो छोरीलाई कार (प्रहरी भ्यान) भित्र राखेकी हुन् वा अन्जानमा राखेकी हुन् ? ३० वर्षीया बारकरले अदालतमा आफुविरुद्ध छोरीको मृत्यु अभियोगमा दर्ता भएको मुद्दा खारेज गर्न माग गरेकी थिइन् ।